အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲပြီးနောက် Santa Clara လေဝိအမျိုးအတွက် Rolling Stones ၏အဖွဲ့ - လူတွေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲပြီးနောက် Santa Clara လေဝိအမျိုးအတွက် Rolling Stones ၏ "ဒီအဖွဲ့က - လူတွေ
အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲပြီးနောက် Santa Clara လေဝိအမျိုးအတွက် Rolling Stones ၏အဖွဲ့ - လူတွေ
Tele RELAY တစ်ခု 11 စက်တင်ဘာလ 2019
ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ သင်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device ကိုအပေါ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုပြဿနာများကြုံတွေ့ရလျှင်
Santa Clara - ထို Rolling Stones အနည်းငယ်ပိုအချိန်ရတယ်ဆိုပေမယ့် သြဂုတ်လ 18 အပေါ်ကိုလေဝိအမျိုးရဲ့အားကစားကွင်း အဆိုပါခရီးစဉ်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းနှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များအားကစားကွင်းသေချာသည်, မိမိ micromanagement နှင့် 11 နာရီအကြာတွင်ချမှတ်ပြောင်းလဲမှုများများအတွက် Santa Clara ၏မြို့ဝေဖန် "ကစားရန်အနှောင့်ရှက်ရကျိုးနပ်မဟုတ်ဘူး။ "
" ... သင်ကသွားရောက်ချင်ကြသည်မဟုတ်လော နောက်ထပ်ရှိုး? သင့်ရဲ့ site ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျပန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြောင်းအလဲ၏များပြားလှ၏တစ်ဦးပါတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ဖြစ်လာသကဲ့သို့ငါ ", ခံစားရအဖြစ်များစွာသောအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမား ယောဟနျသ Morrison, site ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာရေးသားခဲ့သည်။ လေဝိအမျိုးရဲ့အားကစားကွင်း, ဂျင်မ် Mercurio ၏ CEO ဖြစ်သူမှစာတစ်စောင်အတွက် Rolling Stones ၏ Filter ကို 2019 ခရီးစဉ်, အဘယ်သူမျှမ
Morrison တို့ကကိုးကားသည်လွန်ခဲ့သောမိနစ်အပြောင်းအလဲများနှင့်အုပ်စုများ၏လုံခြုံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးမိုက်ကယ် Wozniak များထဲတွင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ဖျော်ဖြေပွဲ pyrotechnics ဖျက်သိမ်း။ အခင်းဖြစ်ပွားရာစစ်ဆေးခြင်းမှလေကြောင်းခရီးဖြင့်သွားလာရန်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပုံဟုမေး - က $6000 ကုန်ကျ - သူတို့ကိုအုပ်စုအစာကျွေးမယ့်အားကစားကွင်းစားသောက်ဆိုင်ဧရိယာသုံးစွဲဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်မှာ "ဒါကြောင့်အမှတ် pyro ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pyrotechnician အဖြစ်အပျက်မရှိဘဲအများအပြားအနုပညာရှင်တွေများအတွက်အားကစားကွင်းနှင့်အမေရိကတစ်လွှားမရေမတွက်နိုင်သောဖျော်ဖြေပွဲဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သူကိုမီးဌာနတွေရဲ့မေတ္တာရပ်ခံချက်မနာခံလျှင်သူ့ကိုပြောပြမည်သည့်အခါ ကအနက်ရောင်ပြည်နယ်တွေအကြောင်းပါလိမ့်မယ်, "Morrison ရေးသားခဲ့သည်။ "တကယ်ပဲ, သောသင်လည်ပတ်ပုံကိုဖွင့်?"
အဆိုပါမြို့တော်ကိုဒါရိုက်တာ Deanna Santana ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ 49ers ဟုဤထုတ်ပြန်ချက်များကိုပယ်ချ, စီမံခန့်ခွဲရသောလေဝိရဲ့လည်ပတ် "ဟုအဆိုပါမြို့များ၏အာရုံကိုမှနှောင်းပိုင်းပြဿနာများကိုသယ်ဆောင်" ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအောင်သူ့ကိုအတင်းအကျပ် အတွင်း
Santana "မြို့ဖြစ်ရပ်များအဆောက်အဦ codes တွေကိုမီးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမှကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေရန်တို့အတွက်ဒါဟာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လေးဆယ်-dwarves နှင့် developer များအလွန်အကျွံသို့မဟုတ် micro-managed အတိုင်းဤစည်းမျဉ်း function ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသည်"
အဆိုပါမြို့ပုံအားကစားကွင်းနေဆဲသေးငယ်တဲ့ဒဏ်ငွေနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, 22h မှညမထွက်ရအမိန့်အပြီးအားကစားကွင်း, 23h တစ်ဦးအပိုဆောင်းနာရီကစားရန်အ Rolling Stones ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အားကစားကွင်းသူ့ဟာသူ, Morrison သူ့ကိုချီးမွမ်း, သူလာလိမ့်မယ် "ဟုကိုပိုပြီးအဆင်သင့်အခြေအနေများအောက်တွင်။ "
"သင်၏ system ကိုသာလွန်သည်, သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းခြီးမှမျးဖြစ်ပြီးသေးအခါတိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးသစ်ကိုအုပ်စိုးမှုဖွင့်အရေးကိစ္စမှလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်ဟုသိမှတ်, လေဝိသားအပေါင်းတို့, cringe ကစားများ၏တကယ်တော့ဖျောပွထားသ ကျနော်တို့ charging သို့မဟုတ်ကြိုတင်ဂီယာစတင်မှီ, "Morrison ရေးသားခဲ့သည်။ "ငါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုနားလည် ... ဒါပေမယ့်ကြီးအမည်မသိသို့မဟုတ်ကျပန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဤအားကစားကွင်းတွင်ကစားရန် bookers hesitating နေကြတယ်။ "
Wozniak, အားကစားကွင်း၏မန်နေဂျာတစ်ဦးကသီးခြားစာ၌, မြို့ကြောင်းအခိုင်အမာပြောပါတယ် "ဟုအဆိုပါမြို့ရိုင်းဖြစ်၏။ " နှင့်အတော်လေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်အပြောင်းအလဲများကိုနောက်ဆုံးမှာ Wozniak ဟာအကောင်းဆုံးပူးတွဲ၌သူတို့ကိုအားမရသဖြင့် "ငါတို့ပရိတ်သတ်တွေအန္တရာယ်ကပြောပါတယ်ရှိရာခရီးသည်များရပ်နေဘို့ဒေသတဝိုက်အတားအဆီးတွေ၏ဆောက်လုပ်ရေးအပါအဝင်စွန့်ပစ်ခဲ့ တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ထိန်သိမ်းကဝိုင်း။ "
ငါ Wozniak အီးမေးလ်တွင်ရေးသားခဲ့သည် "လူအပေါင်းတို့သည်စည်းမျဉ်းများနှင့်အ micromanagement နားမလည်ကြဘူး။ "ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းမြို့အားဖြင့်ယူဆောင်သည့်အခက်အခဲများနှင့်မသေချာမရေရာ၏မှတ်ချက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသင့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မယ်။ "
Santana သည့်မီးရှူးမီးပန်းများရှိုးမြို့အကုမ္ပဏီ pyrotechnics တုန်ခါမှုတွေကနေတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, ဖျက်သိမ်းမခံခဲ့ရဟုပြောသည်။ 15 သြဂုတ်လအပေါ်အတည်ပြုခဲ့သောသော်လည်းမကမကထ။
"ဒါဟာအားပေးထောက်ခံသူတွေများကမမျှတခြင်းနှင့်အထင်အမြင်မှားစေဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် application ကိုမီးရှူးမီးပန်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုအဆိုပြုပေမယ်သာတုန်ခါမှုတွေကို အသုံးပြု. မပြုခဲ့စဉ်အခါ, စီးတီးအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ အဆိုပါစီးတီးလက်ခံရရှိသောတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြု, "Santana အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
မီးသတ်ဦးစီးချုပ်ရုဗင်တောရက်စ် pyrotechnic ပြပွဲစုစည်းဖို့မဆုံးဖြတ်ချက်က "အနုပညာရှင်-ကမကထ / စည်းရုံးရေးမှူး / စည်းရုံးရေးမှူး / စည်းရုံးရေးမှူးများကခေါ်ဆောင်သွား" ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ "ခွင့်ပြုမိန့် 22 နာရီပြီးနောက်မီးရှူးမီးပန်းများအခှငျ့အာဏာမထားဘူးသောကြောင့်
"ဒီ pyrotechnician မီးဌာနကထုတ်ပေးသည့်ခွင့်ပြုမိန့်၏အခြေအနေများလေးစားရွေးချယ်ခဲ့ပြီး 22 နာရီအကြာတွင်ဆိုမီးရှူးမီးပန်းများကိုဖွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး," တောရက်စ်အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။  ဖြောင့်မတ်ဧရိယာထိုင်ခုံအတွက်အတားအဆီးတွေများအသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးကတိုင်ကြားမှု Wozniak, အန္ဒြေ Crabtree, ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဒါရိုက်တာ, မြို့ပုဂ္ဂိုလ်များပိတ်ဆို့မယ်လို့သေချာစေရန် "အတော်ကြာ options များ" ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ် အဘယ်သူမျှမ output ကိုလာမယ့်နောက်ဆုံးအားကစားကွင်းအထိမ်းအမှတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖုံးအုပ်တိပ်သုံးလို့ရတယ်ကောက်ချက်ချ
Morrison လည်းသူကပြောပါတယ်ယခင်ကလေဝိအမျိုးရဲ့ရန်လိုအပ်ဖူးသောအင်ဂျင်နီယာခရီးစဉ်အဆောက်အဦများခြေလှမ်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးသောအရာကိုတစ်ဦး "နောက်ဆုံးမိနစ်တောင်းဆိုမှုကို" ၏ညည်းညူ။ အားကစားကွင်း။
Crabtree စစ်ဆေးခြင်းအပေါ်မြင်ကွင်းတစ်ခုစံအလေ့အကျင့်တွေဟာနှင့်အခြားဖျော်ဖြေပွဲအတူတူလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ပတ်သက်. 10 ရက်အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီထုတ်ပေးမီအဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲရေးအခြေအနေကိုသတိထားမိခဲ့တယ်, Crabtree အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါစာနှစ်စောင် Rolling Stones အားကစားကွင်း operating နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း, 49ers ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတို့ကသတင်းအေဂျင်စီဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတစ်နှစ်။
ဟူး Chandhok, လူထုရေးရာနှင့်မဟာဗျူဟာဆက်သွယ်ရေး 49ers ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Rolling Stones ်ထမ်းများ၏တိုင်ကြားချက်နောက်ဆုံးတွင်ပြိုင်ဘက်ကိုရှာဖွေအားကစားကွင်းစွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောမြို့များ၏တိုက်ခိုက်သဘောထားကိုသရုပ်ပြပြောသည် ပါရမီ။
Santana ရည်ညွှန်း Chandhok said: "သူ့လုပ်ရပ်များတိုက်ရိုက်ပရိသတ်ထိခိုက်ပါပြီ။ ထိုသို့သော position နဲ့ဆက်ဆံမြို့တော်ဝန်ဝေဒနာတွေနိုငျ [Lisa ကို] Gillmor, ဒါပေမဲ့သူတို့ Santa Clara အပေါငျးတို့သနေထိုင်သူများကိုထိခိုက်ဆက်လက်။ "
သူ Santana ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Rolling Stones ၏ဝန်ထမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောကြောင့်တိုင်ကြားချက်မြို့တော်ကိုမအံ့သြသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။
Chandhok သူလေဝိသည်မှာ "အားလုံးမဟုတ်, အဓိကဖြစ်ရပ်များသည်မှန်လျှင်, အားလုံးနီးပါး" pyrotechnics ပါဝင်ပတ်သက်နေသူကဆက်ပြောသည်။
49 လူတွေ Morrison နှင့် Wozniak Chandhok ၏အက္ခရာကျရကြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် "အားပေးခဲ့တယ်နှင့်စနစ်တကျပရိတ်သတ်များနှင့်စပွန်ဆာထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ "
ဘောလုံးအသင်း၏ခေါင်းဆောင်များအဓိကအား 2014 နာရီပြီးနောက်, 22 အတွက်အားကစားကွင်း၏အဖွင့်စဉ်ကတည်းကမြို့သူမြို့သားတွေနဲ့ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဆိုသညျကား, ကြီးများ၏အမည်များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အရောင်းဇာတ်စင်ညှဉ်းဆဲမည်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်နှင့် 23 နာရီညမထွက်ရအမိန့်၏ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ညမထွက်ရအမိန့်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကအဖွဲ့ ကိုးကား. ယင်းညမထွက်ရအမိန့်တစ်ခုစိတ်ပျက်မိကြောင်းစွပ်စွဲ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်အဆုံးစွန်၏နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်။ ယခုနှစ် အစား 750 သန်းခန့်မှန်းချက်များ 0005ဒေါ်လာပမာဏ။
တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲ 2016 အတွက်ဘီယွန်းစ2နှင့်ဖျော်ဖြေပွဲ Coldplay နှင့် U2017 အပါအဝင်လေဝိအမျိုးရဲ့အားကစားကွင်းမှာတချို့ကအကြီးအပြပွဲ, ချိုးဖောက်ညမထွက်ရအမိန့် ။ သေးငယ်တဲ့ဒဏ်ငွေအတွက်ရရှိလာတဲ့။ မကြာသေးမီကအများဆုံးအမြတ်အစွန်းခရီးစဉ်များအတွက်စံချိန်သတ်မှတ်ထားသူသည်ဗြိတိသျှအဆိုတော်-တေးရေးဆရာ Ed Sheeran, တစ်ဦးပြပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ညမထွက်ရအမိန့်သူ၏ခရီးစဉ် 2018 အဘို့စင်မြင့်။
အဆိုပါမြို့ကလည်းဆူညံသံများနှင့် traffic ကိုဆန့်ကျင်အိမ်နီးချင်းအားကစားကွင်းများအတွက်အရေးပါသောကာကွယ်မှုအဖြစ် aa ညမထွက်ရအမိန့်ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအားကစားကွင်းကြောင့်ယှဉ်ပြိုင် 49ers လွဲမှားစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့၏ဝင်ငွေရှုံး, မြို့ကဆိုသည်။
ယင်း၏ခေါင်းဆောင် Mick Jagger ဟောင်း 75 နှစ်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကနှလုံးခွဲစိတ်ခဲ့ပြီးနောက် Rolling Stones ၏တနင်္ဂနွေဖျော်ဖြေပွဲ်ပြီးခဲ့သည် .
] မြို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်, Lenka Wright (19459017), ဆီလီကွန်ဗယ်လီ Voice ကို 20 သြဂုတ်လပြောသည်ခဲ့သော်လည်း Santana သည့်ညမထွက်ရအမိန့်တစ်နာရီတစ်ခု extension ကိုအခွင့်အာဏာခဲ့ Santana မြို့တော်ကိုသတိထားမိခဲ့ပေမယ့်မပါသဘောတူညီချက်, ချဲ့ထွင်ဖို့ဖန်ဆင်းခံရသည်ဟုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောသည်။ ဒါကြောင့်မူလကမေလထဲမှာတနင်္ဂနွေအဘို့စီစဉ်ထားသောကြောင့်ထိုအဖြစ်အပျက်ဖွယ်ရှိ 23 နာရီကိုသွားလိမ့်မယ်။
ငါဖျော်ဖြေပွဲ 22 နာရီထက် ကျော်လွန်. သွားရလိမ့်မယ်လို့ကွိုမွအဖြစ် "ငါသည်အားကစားကွင်း၏မန်နေဂျာအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ငါချော၏ဖြစ်နိုင်ခြေအားဖြင့်ချိုးဖောက်ခြင်းငါ့တုံ့ပြန်မှုကန့်သတ်မယ်လို့ "Santana အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါမြို့အခြားမျက်နှာစာပေါ်အဖွဲ့သည်စီမံခန့်ခွဲမှုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ မေလ, မြို့ခြိမ်းခြောက် လက်ျာအဖွဲ့ပြန်ရုပ်သိမ်း အားကစားကွင်းများ၏စစ်ဆင်ရေးအပေါ်ကျုံ့နှင့်ဇာတ်စင်လုပ်သားများဖို့ရေပန်းစားလုပ်အားခပေးချေမမူကြောင်းစွပ်စွဲချက်ကြောင့်အသင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်။
အဆိုပါမြို့ကိုလည်း Mercurio, အားကစားကွင်း၏မန်နေဂျာပြီးနောက်ငွေပေးငွေယူအမှားတွေဝေဖန် Mercurio သူယခင်ကရှယ်ယာဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် အားကစားကွင်းအလုပ်လုပ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခု။ Mercurio ကတည်းကကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးအတွက်၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းဒီကိစ္စကိုသို့ပြည်နယ်အေဂျင်စီကျင့်ဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Contactez Thy Vo au 408-200-1055 ou à l'adresse tvo@bayareanewsgroup.com.
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား mercurynews.com
11-စက်တင်ဘာလ: မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, ရော့ Lowe ... ဤလူနီးပါးသည်ထိုနေ့သေဆုံးသွားသူကို
သူ၏ဖခင်ယင်း Duchess များမြှောင်များနှင့်မင်းသမီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကို: တုန်လှုပ် Meghan Markle,
တော်ဝင်ခရီးစဉ်ကိတ်နှင့်ဝီလျံ - စုံတွဲသည်ပါကစ္စတန်ရှိကျောင်းသို့လုံခြုံရေးလည်ပတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လည်ပတ်သည်
အိန္ဒိယ - ၀ န်ကြီးချုပ် Narendra Modi သည် Diwali ထုတ်ဝေမှု Mann ki Baat အတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုဖိတ်ကြား | အိန္ဒိယသတင်း
ထုတ်လုပ်မှုအခွန် - မကြာမီလျှော့ချမည့်ဒီအခွန်ကဘာလဲ။ - ဗီဒီယို
Côte d'Ivoire: အန္တရာယ်ရှိသောကလေးများ ... 644 တွင်အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့်ကလေးသူငယ်များဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်269
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,024
TECH & Telecom2,377